Fighting Immortal Statue ( 2020 ) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ April 17 2020မှာထှကျထားတဲ့ Action Drama Romanceသိုငျးကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ထနျြးဟယျနှဈပိုငျးကာလနတျတံခါးပှငျ့လာပွီးနတျအပေါငျးဟာလူ့ပွညျကိုထှကျပွေးလာကွပွီး လောကသားတှကေိုဒုက်ခပေးတဲ့နတျတှရှေိနပေါတယျ..
မိုးနတျမငျးဟာ သစ်စာဖောကျနတျတှကေိုဖမျးဆီးစဖေို့ထနျြးကငျြ့စေးဌာနကို တာဝနျပေးခဲ့ပါတယျ…ထနျြးကငျြ့စေးကိုအုပျခြုပျရတဲ့ကငျြ့ကြှငျးအမတျ ဟာသစ်စာဖောကျနတျတှကေိုလိုကျရှာပွီး ဖမျးဆီးစခေဲ့ပါတယျ…ဒါပမေယျ့သစ်စာဖောကျနတျတှကေို နတျပွညျသို့ပွဈဒဏျခံယူဖို့မပို့မီ ထနျြးကငျြ့စေးမှာရှိနစေဉျသကွေပေကျြစီးမှုတှမြေားလာတဲ့အခါ….
ထနျြးကငျြ့စေးမှာတာဝနျထမျးဆောငျတဲ့မုရုံဖုံးက သစ်စာဖောကျနတျတှရေဲ့အစှမျးကိုစုပျယူပွီးသတျဖွတျနတေယျလို့ မတရားစှပျစှဲခံရတဲ့အခါ အမှနျတရားကိုဖျောထုတျနိုငျပါ့မလား…နောကျကှယျကကွိုးကိုငျနသေူကဘယျသူဖွဈမှာလဲ….
ထငျမထားတဲ့လှညျ့ကှကျတှပေါဝငျလို့ သဘောကမြိတဲ့ဇာတျကားတဈပုဒျပါမုရုံဖုံးနဲ့ လော့ရှီးတို့ရဲ့အခဈြကို ကွညျ့ရငျး ရငျထဲစူးနဈဖှယျခံစားမိပါတယျ
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ April 17 2020မှာထွက်ထားတဲ့ Action Drama Romanceသိုင်းကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ထျန်းဟယ်နှစ်ပိုင်းကာလနတ်တံခါးပွင့်လာပြီးနတ်အပေါင်းဟာလူ့ပြည်ကိုထွက်ပြေးလာကြပြီး လောကသားတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့နတ်တွေရှိနေပါတယ်..
မိုးနတ်မင်းဟာ သစ္စာဖောက်နတ်တွေကိုဖမ်းဆီးစေဖို့ထျန်းကျင့်စေးဌာနကို တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်…ထျန်းကျင့်စေးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ကျင့်ကျွင်းအမတ် ဟာသစ္စာဖောက်နတ်တွေကိုလိုက်ရှာပြီး ဖမ်းဆီးစေခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမယ့်သစ္စာဖောက်နတ်တွေကို နတ်ပြည်သို့ပြစ်ဒဏ်ခံယူဖို့မပို့မီ ထျန်းကျင့်စေးမှာရှိနေစဉ်သေကြေပျက်စီးမှုတွေများလာတဲ့အခါ….
ထျန်းကျင့်စေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့မုရုံဖုံးက သစ္စာဖောက်နတ်တွေရဲ့အစွမ်းကိုစုပ်ယူပြီးသတ်ဖြတ်နေတယ်လို့ မတရားစွပ်စွဲခံရတဲ့အခါ အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါ့မလား…နောက်ကွယ်ကကြိုးကိုင်နေသူကဘယ်သူဖြစ်မှာလဲ….
ထင်မထားတဲ့လှည့်ကွက်တွေပါဝင်လို့ သဘောကျမိတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ပုဒ်ပါမုရုံဖုံးနဲ့ လော့ရှီးတို့ရဲ့အချစ်ကို ကြည့်ရင်း ရင်ထဲစူးနစ်ဖွယ်ခံစားမိပါတယ်